Next	Jilli hooggantoota Oromia Midia Network Qondaaltota Mootummaa Naannoo Amaaraa waliin mari’atan »
Previous « Yaman keessatti makiinaa barattootaa irratti haleellaa raawwatameen namni heddu dhume.
Qaamni ilma namaa hundi dalagaa uumameef qaba. Akkasuma qaamni hundi eega sa’aa dheeraaf dalagee booda…
Ilmi namaa seera uumamaa dhiisee seera ofii baaseen eega of bulchuu jalqabee booda nageenyi addunyaa…
Uumama Rabbiin keenya uume lakkoofne fixuu hin dandeenyu. Wanti hundi bifa fi sanyii garagaraa qaba.…
Ulaagaan bareedinni ittiin madaalamu seenaa addunyaa tanaa keessatti garaagarummaa qaba. Wanti waggoota 500 dura akka…
Piraanhaan sanyii qurxummiiti. Maqaan piraanhaa jedhu afaan biraaziliitiin “Qurxummii ilkaan qabu” jechuudha. Qurxummiin kun ilkaan…